Tuesday, 17 Mar, 2020 9:16 AM
विश्वभर नै कलाकारलाई सम्मान गरिन्छ। खासगरी कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भनी सम्मान व्यक्त गरिन्छ । गहना यस्तो आभूषण हो, जसले शोभा बढाउने काम गर्छ। त्यसैले विश्वमा गहना बनाउने धातु सबैभन्दा महंगा छन् । कलाकारलाई समाजको ऐनाको रुपमा पनि परिभाषित गरिन्छ । अर्थात कलाकार जसरी प्रस्तुत हुन्छन् समाज पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ । अहिले नेपाली बजारमा एक जना नायिका आँचल शर्माको खुबै चर्चा चुलिएको छ । कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भन्ने गरिए पनि तिनै कलाकारलाई गहनाले छोपिन मन लागेपछि चर्चा चुलिएको हो ।
अभिनेत्री आँचल शर्मा र पोषण विद् उदिप श्रेष्ठले फागुन २९ गते लगनगाँठो कसे । बिहिबार काठमाडौंको एक होटलमा विवाह गरेका नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठले शनिबार काठमाडौंको पाँच तारे होटल हायातमा भव्य पार्टीको आयोजना गरे । अभिनेत्री आँचल उदिपसँग हेलिकोप्टर चढेर १६ लाखको लेहेंगा लगाएर पार्टीमा पुगिन् । १६ लाख पर्ने १६ केजीको उक्त लेहेंगालाई लिएर नेपाली बजारमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा कायमै छ । आँचलले शनिबार विवाह पार्टीमा करिब ६० लाख हारहारीको गहना समेत लगाएकी थिइन ।
अब कुरा रह्यो उनले आफ्नो विवाहमा जस्तोसुकै लुगा लगाउन अरूलाई के चासो पर्यो। तर कुरा के हो भने आचल नायिका हुन् । उनी सार्वजनिक व्यक्ति भएका कारण उनको जीवनयापन अरूले नियाली रहेका हुन्छन् । समाजका ऐना मानिएका कलाकारले यसरी तामझाम सहित विवाह गर्दा अरूलाई कस्तो सन्देश जाला । कतिपय फिल्ममा उनले पनि विपन्न तथा सिमान्तकृत परिवारका प्रतिनिधित्व गरेकी होलिन । कतिपय फिल्ममा दाइजो र तडक भडक विरूद्धका आवज वोलिकी होलिन । तर व्यवहारिक जीवनमा भने उनले संस्कृतिमाथी नै भद्दा मजाक हुने गरी विवाह गरिन् ।
नेपालमा सिटामोल नपाएर मर्ने जनता छन् । उनी जस्तै कलाकारहरू समेत त्यस्ता ठाउँमा अस्पताल बनाउन तल्लिन छन् । त्यो महगोँ विवाहको खर्च कटाएर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए आचल यतिखेर सबैको हाइहाइ हुने थिइन । विवाहमा १६ लाखको लेहेंगा, ६० लाखको गहना, ३ लाखको मेकअप तथा १५ लाखको हेलिकप्टर यात्राले नेपालमा पुँजीपतिहरूको ठाँटको विषयलाई समेत चित्रण गरेको छ । आचलको विवाहले उनिजस्तै नायिकालाई जबरजस्ती प्रचलनको भारी बोकाएको छ ।
अब कुरा रह्यो आचलको विवाहमा गरिएको खर्च सरकारले छानविन गर्ने कि नगर्ने ? उनको विवाहको स्रोत खोज्ने कि नखोज्ने ? उनिहरूले कमाएको पैसाबाट सरकारलाई आयकर तिरेका छन् कि छैनन् ? यो पनि खोजिको विषय बन्न जरूरी छ । अर्को कुरा नेपालमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ अन्तर्गत विवाहमा ठूलो रकम खर्च गर्न पाइदैन । अब आचललाई सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ अन्तर्गत कारबाही गरिनुपर्ने माग समेत उठेका छन् ।